Igbo, John: Lesson 006 - Onye Baptizim na-akwadebe ụzọ nke Kraist (Jọn 1:6-13) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 006 (The Baptist prepares the way of Christ)
2. Onye Baptizim na-akwadebe ụzọ nke Kraist (Jọn 1:6-13)
9 Ezi ìhè nke nēnye madu ọ bula nke nābia nime uwa ìhè. 10 Ọ nọri n'uwa, ekèkwara uwa site n'aka-Ya, uwa amaghi kwa Ya.
Kraist bu ezi ìhè n'uwa. Mmụọ Nsọ buru amụma banyere ọbịbịa nke narị afọ ya gara aga site n'ọnụ ndị amụma. Akwụkwọ Agba Ochie juputara n'amaokwu banyere ọbịbịa nke Kraịst n'ime ụwa anyị. N'ihi ya, Aịsaịa onye amụma kwuru, sị, "N'ihi na, le ọchịchịrị ga-ekpuchi ụwa, na miri ọchịchịrị ndị mmadụ; ma Onyenwe anyị ga-ebilite n'ihi gị, na ya ga-ahụkwa ebube gị n'ahụ" (Aisaia 60: 2).
N'amaokwu anyị, okwu a bụ "ụwa" ugboro anọ. Nye onye ozioma ozioma Jọn bu ihe okwu a di nso nke ochichiri, nihi na edere ya n'akwukwo, "uwa nile ka etinyeworo n'okpuru aka onye ojo" (1 Jọn 5:19).
Ná mmalite, ụwa abụghị ihe ọjọọ, n'ihi na Chineke kere ya nke ọma. Mma na ịdị mma ya jupụtara ụwa. "O we hu ihe nile o mere, ma, le, o di nma" (Jenesis 1:31). Chineke kere mmadu n'onyinyo ya ma nye ndi nne na nna nke mmadu ndi gosiputara ìhè nke Onye Okike di ka igwe.Ma n'ihi nganga, ha nile ghọrọ ndị ọjọọ na ndị nupụ isi. Ha hapụrụ mkpakọrịta Chineke n'ime obi ha n'ihi na ha meghere onwe ha nye mmụọ nke ọchịchịrị. Iche onwe ya site n'aka Chineke na-eme ka ihe ọjọọ dịrị mgbe nile, dịka Devid kwupụtara n'Abụ Ọma 14:1, "Onye nzuzu asịwo n'obi ya, 'Ọ dịghị Chineke.' Ha rụrụ arụ, ha emewo ihe arụ, ọ dịghị onye na-eme ezi ihe. "Onye nkwusa ozioma John, na-agba akaebe na Kraịst bịara n'ụwa ọjọọ a, dị ka anyanwụ na-ada nwayọọ nwayọọ, na-achụpụ ọchịchịrị n'ihu ya. Ìhè nke Kraịst abanyeghị ụwa anyị dị ka égbè ọkụ na-enwu gbaa. Ma o ji nwayọọ nwayọọ banye ya, na-eme ka mmadụ niile mata. Nke ahụ bụ, Onyenwe anyị abịaghị dịka onye ikpe na onye omegbu. Ma ọ bịara dịka Onye Nzọpụta na Onye Mgbapụta. Kraist nile kwesiri ka ndi mmadu mara ya. Enweghị nkuzi a, ha nọ n'ọchịchịrị. Kraịst bụ ezi Enlightener na ọ dịghị onye ọzọ. Onye obula nke nakweere ihe omuma ya site na ozioma gagbanwe aru ya ma buru ezi ma kpoo ndi ozo.
Ị ghọtara ihe okwu a pụtara, "Onye Okike bịara n'ụwa ya"? Onye nwe ya batara ya, eze wee biarue ndị ya nso. Ònye ga-eteta ma kwadebe maka ọbịbịa ya? Ònye ga-amụ eziokwu banyere ọbịbịa ya, iwu ya na nzube ya? Ònye bu onye rapuru ihe ojo ya na ihe efu n'azu ya ma bia nso ma nabata Chineke nke nabia? Ònye bụ onye na-aghọta oge a na-akpali akpali na pụrụ iche nke Chineke ga-abịa?N'ihi ya, Onyenwe anyị nọ na mberede n'etiti ndị mmehie; Ọ bịara n'amaghị ama, obere ma dị jụụ. O choghi ichota uwa na idi uku ya, ike ya na ebube ya, kama igosi umeala n'obi ya, ima na eziokwu. Kemgbe mmalite nke okike, nganga bụ ihe kpatara ọdịda nke ihe a kpọrọ mmadụ. Ya mere Onye Pụrụ Ime Ihe Niile gosipụtara onwe ya dị ka Onye Dị Umeala n'Obi. Ọbụna Setan chọrọ ka ọ dị ike, dị ebube ma dị nkọ dị ka Chineke.
Ma Kraịst pụtara dị ka nwatakịrị na-adịghị ike, na-edina n'ebe a na-eri anụ nri dị ala. Ya mere, site n'ịdị umeala n'obi ya, ịdị nwayọọ ya, na nrubeisi ya, ọ gbadara n'ọnọdụ kasị ala iji weta nzọpụta maka ihe nile a kpọrọ mmadụ.Gee ntị, unu niile! Mgbe ozi ọma a gasịrị, anyị na-agụ okwu na-emenye egwu ma na-akụda mmụọ nke bụ na ụwa amaghị ìhè ma ghara ịghọta ya. Ọ na-aghọta na Ọkpara Chineke abịawo nso na nọ n'etiti ha. Ndị mmadụ nọgidere bụrụ ndị ìsì na ndị nzuzu n'agbanyeghị nkà ihe ọmụma ha, sayensị ha, na ọgụgụ isi ụwa ha. Ha amaghi na Chineke n'onwe ya guzoro n'ihu ha ma amaghi Onye Okike ha ma ha anakwere Onye Nzọpụta ha.
Site na eziokwu a na-egbu mgbu, anyị nwere ike ịkọwa ihe dị mkpa n'alaeze Chineke. Ọ bụ na anyị apụghị ịghọta Chineke na uche anyị na ike anyị nwere nanị mmadụ. Ihe omuma banyere uzo nke Kraist bu amara nke oma na onyinye sitere na Chineke n'ihi na obu Mo Nso nke nekpo ayi site na ozioma, neme ka ayi mara onyinye ya ma debe ayi n'ezi okwukwe. Ya mere ayi aghaghi ichegharia ma ghara ịdabere na amamihe nke uche anyi, ma obu na uche nke obi ayi. Anyị niile ga-emepe onwe anyị ka anyị nwee ike ịchọta ìhè dịka okooko osisi na-emeghe ka anwụ na-acha. N'ụzọ dị otú a, okwukwe na Kraịst na-emepụta ezi ihe ọmụma. Nke a na-amalite okwukwe abụghị site na anyị, kama ọ bụ ọrụ nke Mmụọ nke Onyenwe anyị na ndị niile na-erubere ya isi.
EKPERE: Anyị na-ekele gị, Onyenwe anyị Kraịst, na ị bịara n'ụwa. Ị biaghị maka ikpe na ịbọ ọbọ, kama maka ịkụziri mmadụ nile, nakwa maka nzọpụta ha. Ma anyị bụ ndị ìsì na ndị nzuzu. Gbaghara anyị ajọ omume anyị ma nye anyị obi na-erube isi. Mepee anya anyi ka anyi wee hu gi, ma meghee obi anyi n'igwe nke mmuo di nwayo, ka anyi wee biri ndu nke Mo Nso.
Gịnị bụ mmekọrịta dị n'etiti Kraịst bụ Ìhè na ụwa gbara ọchịchịrị?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:30 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)